१३ सय बढीलाई सुत्केरी सेवा दिएका अहेब भट्टराई भन्छन्, गर्भवतीका लुगा धोइदिन पनि घिन मानिन
पुस २८, २०७३ बिहिवार २२:१७:०० प्रकाशित
स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामीको उपचारका क्रममा नरम रुपमा प्रस्तुत हुँदैनन्, रुखो व्यवहारले बिरामी र बिरामीका आफन्त आजित हुन्छन् भन्ने गुनासा धेरै सुनिन्छ। यसै पनि मान्छेको मानसिकता सामान्य अवस्थामा भन्दा बिरामी भएको बेला कमजोर हुन्छ, बिरामीका आफन्त सँधै हतारो र आत्तिएको अवस्थामा हुन्छन्। त्यो बेला डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरु नै उनीहरुको भरोसाका केन्द्र हुन्छन्।
तर स्वास्थ्यकर्मीले प्रेमपूर्वक व्यवहार नदेखाउँदा उनीहरुको मन साँच्चै कुँडिन्छ। नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रुपमै अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरुमा बिरामी र उनका आफन्तसँग गरिने व्यवहारलाई लिएर धेरै बहस भएका छन्।
अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारलाई लिएर टीकाटिप्पणी हुँदै गर्दा नुवाकोटमा भने एउटा स्वास्थ्य चौकीले उदाहरणीय काम गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थालाई बिरामीमैत्री बनाउने पहलस्वरुप नुवाकोटको चतुराले स्वास्थ्य चौकी भने सुत्केरी गराएको स्थान र सुत्केरी महिलाले लगाएका लुगासमेत धोइदिने अभियानमा छ। गर्भवती महिला सुत्केरी भएपछि आउने रगत, पिपलगायतका फोहरले भिजेका कपडा सफा गरिदिने पनि स्वास्थ्यकर्मी होलान् र? भनेर पत्याउन मुस्किल पर्छ। तर विगत १७ वर्षदेखि उक्त स्वास्थ्य चौकीमा प्रमुख भएर काम गरिरहेका सिनियर अहेब जीवन भट्टराई यस्ता कामलाई सेवा सम्झेर गरिरहेका छन्।
'मेरो पहिलो काम स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित रुपमा प्रसूति सेवा (सुत्केरी गराउनु) प्रदान गर्नु हो। सुत्केरी गराउन गर्भवती महिलालाई यहाँ ल्याउने बेला हतारहतार हुँदो होला, कतिपयले फेर्ने कपडा समेत लिएर आउन भ्याएका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा सुत्केरीका कपडा सफा गरिदिनुको अर्को विकल्प रहेन,' चतुराले स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख भट्टराईले भने। यस स्वास्थ्य चौकीमा सातजनाको दरबन्दी भए पनि उनीसहित एकजना कार्यालय सहयोगी मात्र छन्। भट्टराईले भने, 'कतिपय त सुत्केरी गराउन ल्याउने सुत्केरी भएपछिका रगत, पिपलगायतका फोहरले भिजेका कपडा देखेर घिन मान्ने गर्छन्। उनीहरुलाई सिकाउन म नै उदाहरण बन्ने गरेको छु। आफैँ लुगा धुन अघि सर्छु र धोइदिन्छु। आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामी र स्वास्थ्य संस्थालाई त सफा राख्नु पर्यो।'
अहेब भट्टराई चतुराले आएपछि हालसम्म एक हजार तीन सयभन्दा बढी गर्भवती महिलालाई सुत्केरी सेवा प्रदान गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको अकालमा मृत्यु भएको छैन। २०५१ सालदेखि सेवा सुरु गरेका भट्टराई २०५६ सालमा चतुराले पुगेका हुन्। त्यहाँ ०५१ देखि २०५६ सम्म पाँच वर्षमा आठ जना प्रमुख फेरिए। तर अहेब भट्टराई २०५६ देखि निरन्तर रुपमा स्वास्थ्य चौकीको प्रमुखको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन्।
गाविसमा क्रियाशील राजनीतिक संयन्त्रले पनि पटकपटक उनलाई अन्यत्र सरुवा नगर्न जिल्ला तथा केन्द्रीय तहमा आग्रह गर्दै आएको छ। उसो त सोही वर्ष यस स्वास्थ्य चौकी पक्की भवनमा सरेको थियो। '२०५६ को सुरुमै यहाँ आएको हुँ, आएको केही महिनापछि नै गुन्द्री ओछ्याई, सुत्केरी सेवाका सामाग्रीबाट सुत्केरी सेवा दिन सुरु गरेको हुँ। तर सुरुका दिन त गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउन र उनीहरुलाई खोज्न नै धौधौ थियो,' भटृराईले सुरुका दिन सम्झे, 'तपाईंको घरमा गर्भवती महिला हुनुहुन्छ? भनेर गाउँका पुरुषलाई सोध्दा चिकित्सक भएर स्वास्थ्य चौकीमा बसेर ट्याबलेट बाँड्नु नि, किन चाहियो खोजीनिती भन्ने जवाफ दिन्थे। तर हरेस खाइनँ।' भेटघाट हुनेसित गर्भवती भएपछि आउने जटिलता, यसबाट शिशुमा पर्नसक्ने असर, पोषणको महत्व, स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी गराउँदा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा पुग्ने फाइदाबारे जनचेतना जगाउन उनले हार मानेनन्।
'अरु सेवालाई भन्दा प्रजनन स्वास्थ्यलाई नै ध्यान दिएँ,' उनले भने, 'गाउँमा समस्या र चुनौती पनि त्यही नै थियो।' प्रजननको उमेर, गर्भवती भएपछि कम्तिमा चारपटक स्वास्थ्य परीक्षण, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट नै सुत्केरी सेवा, नवजात शिशुलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउने लगायतका विषयमा गाउँमा चेतनास्तर बढेपछि बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको माग आयो। २०६३ पछि सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बर्थिङ सेन्टरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो।
जिल्लास्तरमा त्रिशुली जिल्ला अस्पतालमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भयो। त्यसपछि उनले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर राख्न आग्रह गरे। 'यस कार्यमा गाविसवासीले साथ र ऊर्जा दिए। २०६४ मा नुवाकोटकै स्वास्थ्य चौकीमध्ये पहिलो बर्थिङ सेन्टर यहाँ स्थापना भयो,' आफ्नो मिहिनेत सार्कथ भएको सम्झिँदै उनले सुनाए।
बर्थिङ सेन्टरको पहिलो सेवा पाइन् चतुराले–८ कि चन्द्रा तामाङले। उनीले २०६४ भदौ १० गते बर्थिङ सेन्टरमा छोरीलाई जन्म दिइन्। त्यो बेला लाज र डरले भुतुक्कै भएको बताउँदै चन्द्राले भनिन्, 'श्रीमान्, बाजे, बज्यैले मानिरहनु भएको थिएन, तर डाक्टर साहेब आफैँ घर आउनुभयो। उहाँले कस्तो छ? भनेर सोधिरहनु हुन्थ्यो। घरमा बाजेले झाँक्रीलाई बोलाइसक्नु भएको थियो। डाक्टर साहेब आफैँ घर आएपछि हुन्छ भन्दिएँ। हिँडेरै स्वास्थ्य चौकी गएँ।'
स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति सेवा लिन आउनेको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै प्रसूति गृह भवनसमेत निर्माण गरिदिएको छ। जिल्ला अस्पतालपछि सुविधा सम्पन्न प्रसूति गृह भवन नै चतुराले स्वास्थ्य चौकीमा छ।
अहेब भट्टराईको काम गर्ने इच्छा र जाँगर देखेका यहाँका बासिन्दाले उनलाई अन्यत्र सरुवा भएर जान दिएनन्। उनको मन यतै रम्यो। समाजसेवी ज्ञानबहादुर तामाङले भने, 'उहाँको सेवा भावको लगाव अत्यन्तै अनुकरणीय छ, यसैले हामीले उहाँलाई यहीँ बस्न भनिरह्यौँ। पहिला घरघर गएर गर्भवती महिलालाई सम्झाई-बुझाई गर्नु पर्ने गाउँमा अहिले स्वास्थ्य चौकीमै आएर सुत्केरी सेवा लिनेको संख्या बढेको छ। गर्भवती महिला स्वास्थ्य चौकी आउने क्रम बढेसँगै गाविसमा महिला स्वयंसेविकाले पनि सेवा पुर्याइरहेका छन्। चतुराले गाविसमा २० जना महिला स्वयंसेविकाले सेवा दिइरहेको भट्टराईले बताए।
भट्टराईलाई पहिला-पहिला कर गरेर स्वास्थ्य चौकी बोलाई सुत्केरी गराएका महिलाले दिने गरेको स्यावास्सीले धेरै उर्जा मिल्छ। भने, 'गर्भवती अवस्था भनेको महिलाका लागि निकै जटिल अवस्था हो। त्यो बेला सेवा दिन पाउँदा र उनीहरु बच्चासहित खुसी भएर फर्केको हेर्न पाउँदा निकै आनन्द लाग्छ।' उनले थपे, 'मैले अलि बढी काम गरेर अनि बिरामीलाई राम्रो व्यवहार र हेरचाह गर्दा उनीहरुको मुहारमा खुसी फुल्छ भने किन नगर्नु।'
१७ वर्षदेखि चतुरालेका महिलालाई सुत्केरी सेवा स्वास्थ्य चौकीबाट लिनुपर्छ भन्दै हिँडेका भट्टराईको लक्ष्य भनेको गाविसभरि नै घरमा सुत्केरी गराउने महिलाको संख्या शून्यमा ल्याउनु हो, अर्थात् 'शून्य होम डेलिभरी गाविस' घोषण गराउनु।